भारतले ४५ हजार एसएसबी नेपालको सीमामा खटाएको छ, नेपालले ५५ सय | नेपाल आज
Sunday 22 April 2018 | आइतबार, ०९ बैशाख २०७५
भारतले ४५ हजार एसएसबी नेपालको सीमामा खटाएको छ, नेपालले ५५ सय
बिहिबार, ०३ चैत २०७३ गते प्रकाशित
- नेपाल आज (DR)
चैत–३ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को ज्यादती रोक्न सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर खुला सीमा छ । त्यो सीमाको रक्षाका लागि भारतले सीमा क्षेत्रमा आफ्ना ४५ हजार एसएसबी परिचालन गरेको छ । एसएसबीले भारतको सीमा रक्षा गर्ने बहानामा नेपालीमाथि गोली वर्षाउनेदेखि सीमाना मिच्नेसम्मको हर्कत गर्दै आएको छ ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सीमाको हरेक एक किलोमिटरका लागि भारतले २४ एसएसबी राखेको छ । यता नेपालमा एक किलोमिटरका लागि हामीले जम्मा चार जना सशस्त्र प्रहरी बल राखेका छौं । संख्यामै २४ र ४ को अनुपात हुँदा उनीहरुको मनोबल बढ्नु स्वभाविक हो ।’
[caption id="attachment_61012" align="alignleft" width="300"] सीमाविद श्रेष्ठ[/caption]
सरकारले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका ५ हजार ५ सय जना सीमामा छन् ।
हालै कञ्चनपुरको आनन्दनगरमा नेपाली युवक गोविन्द गौतमलाई एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेपछि सुरक्षाको मामिला अझ संवेदनशील हुँदै आएको छ । सीमाविद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाली सुरक्षा फौजको मनोबल उकास्न सेवा सुविधा, सुरक्षासम्बन्धी सामग्रीले सुसज्जीत पनि पार्नु पर्छ । एसएसबीको बन्दोवस्ती र सशस्त्रको वन्दोवस्ती हेर्दा पनि नेपाली पक्ष कमजोर देखिन्छ । यस्तो हुन हुँदैन ।’
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी डा. उमेशकुमार भट्टराईको मतमा भारतले एसएसबीलाई विशेषतः पाकिस्तानसँगको सीमा सुरक्षाका लागि तालिमप्राप्त बनाएको छ । तिनै एसएसबी नेपालसँगको सीमामा पनि बस्ने गर्छन् । पाकिस्तानसँग जस्तो व्यवहार एसएसबीले गर्छ, त्यही व्यवहार नेपालसँग पनि गर्छ । यति गर्न आवश्यक छैन । तर भइरहेको छ यस्तै ।
डा. भट्टराई भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले देश र जनताको रक्षा गर्ने हो भने खुला सीमा बन्द गर्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तानको जस्तो नभए पनि ठाउँ ठाउँमा इन्ट्री पोइन्ट राखेर बाँकी ठाउँमा काँडेतार मात्रै भए पनि लगाउनु पर्छ ।’
[caption id="attachment_61013" align="alignright" width="300"] पूर्वउपरथी डा. भट्टराई[/caption]
भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षीत हुनुपर्छ भनेर ठूलो चासो दिन्छ । नेपालसँगको सीमाको विषयमा उनीहरु ‘खुला सीमा’ कन्सेप्ट परिवर्तन गर्न चाह“दैनन् । १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी लगायतका असमान सन्धी समायानुकुल संशोधनका लागि छलफल गर्न बनेको प्रबुद्ध समूहको बैठक पनि हुन छाडेको छ । डा. भट्टराई भन्छन्, ‘प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक नेपालमा बस्यो । दोस्रो भारतमा । दोस्रो बैठकमा के भयो थाहा पनि छैन । सरकारले यो क्षेत्रमा बिशेष जोड दिनु पर्छ ।’
प्रबुद्ध समूहले कुनै निष्कर्ष निकाल्नु र सन्धी संशोधन हुने सपना बराबर भइसकेको छ । यता नेपालीमाथि एसएसबीको ज्यादतीको श्रृंखला रोकिएको छैन ।
७३ साउन १३ गते सप्तरीको तिलाठीमा नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने गरी बा“ध बनाएपछि नेपालीहरुले बाध भत्काइदिए । एसएसबीसँगको झडपमा १२ नेपाली घाइते भएका थिए । त्यस्तै ७२ मंसिरमा भारतीय एसएसबीका जवानहरु सुनसरीको हरिपुरमा प्रवेश गरेर यादव थरका पाच सात नेपालीलाई गोली हानी घाइते बनाए ।
७२ मंसिरमै भारत किसनगञ्ज बटालियनका ११ जना झापाको केचनामा पसे । किन पसेको भनेर नेपाली सुरक्षाकर्मीले रोकेर सोधपुछ गर्दा तस्कर लखटदै आउदा नेपाल पसेको थाहा भएन भन्ने जवाफ दिए ।
बर्दियामा पनि त्यस्तै भयो । गुलरिया –८ का मञ्जुरप्रसाद श्रेष्ठको घरमै पसेर भारतीय प्रहरीे हंगामा मच्चायो । सादा पोसाकमा पारिका डिएसपी उदयप्रताप सिंह आफै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । नेपाली नागरिकको घरमा भारतीय प्रहरी पसेर खानतलासी लिएको घटनालाई सरकारले धेरै चासो दिए । तर विषय गम्भीर थियो । सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता कैयन घटना छन् । नेपालका सरकारमा बस्ने मान्छेहरुको मुटु नै परेवाको जत्रो भयो । नेपालले भारतसँग आफ्नो चासोका विषयहरु स्पष्ट राख्न सक्नु पर्छ । त्यो स्पष्टता नेताहरुमा चाहिन्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका साधार्थी केसी सटिक टिप्पणी
गाँजा नस्ट गर्दै नेपाल प्रहरी
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो
आम उपभोक्तालाई सहुलियतमा खाद्यान्न बेच्दै खाद्य संस्थान
टेलिकमको ‘नमस्ते क्रेडिट’ शुरु, ५ देखि ४० सम्म सापटी लिन सकिने
नेपाल टेलिकमले ल्यायाे गज्जव नयाँ वर्ष अफर
देशमा राष्ट्रिय गाैरवका अायाेजनाकाे कमी : खानेपानीमन्त्री बिना मगर
सरकार सिन्डिकेटविरूद्ध उत्रन तयार, यस्ताे छ अवस्था र तयारी
एकता र ध्रुवीकरणमा लामबद्ध हुन अध्यक्ष दाहालको आग्रह
बालिकामाथिकाे बलात्कारमा भारत सरकारले ल्यायाे मृत्युदण्डकाे कानुन
छैटौं राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको तयारी लगभग पूरा, थपिए तीन विधा
प्रचण्डले पचास प्रतिशतको दावी गर्न मिल्दैन (भिडियोसहित)
पम्फा भुसालले रिसाउँदै भनिन्, ‘मिडियाले उछालेर हुन्छ ? एकता चाहिएको हामीलाई हो’ (भिडियो)
केही हदसम्म हामी विदेशीको गोटी भएर देश यस्तो भयो (भिडियो)
उपभोक्तावादी भन्छन्, ‘तीन करोड लिएर मातृका यादव बने व्यापारीका ‘पाल्तु’ (भिडियोसहित)
भीडका नाइके नेता भए, जनताको नाममा रत्यौली मच्चाए !
आहिले सम्मको लोकप्रिय समाचार
माधव प्रसाद गुरागाईं
( इमेल: [email protected]
फोन: +९७७९८०२०८०८०१ )